ICasa Jacinta kunye neJacuzzi eJardin
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguMaría Jacinta
I-Casa Jacinta yinxalenye yeqela lezindlu zasemaphandleni apho iCasa Leandra ikwangowakho, ilungiselelwe kwigadi eqhelekileyo kunye nombono wepanoramic obandakanya iintaba, iilwandle kunye nolwandle. Ukongeza, iziqithi zaseLa Gomera, iLa Palma kunye ne-El Hierro zinokubonwa. Uya kusithanda indawo yam yokukhanya, iindawo ezingaphandle kunye neemvakalelo zoxolo kunye noxolo olunikezelayo. Indawo yam yokuhlala ilungele abatshatileyo kunye neentsapho.
I-Casa Jacinta ine-patio encinci yangasese kunye ne-terrace enemibono yolwandle kunye neentaba, kwaye ukongeza kwigadi entle ene-500-metres Jacuzzi eqhelekileyo kunye neendwendwe ezinokwenzeka zeCasa Leandra.
Indawo ekhangayo yaseTaucho yindawo yokuhlala yasemaphandleni kwindawo ephakamileyo yeemitha ze-900, ithathwa njenge-Asethi yeMdla yeNkcubeko ngenxa ye-typology yezindlu zayo, i-agrarian yaseCanarian eqhelekileyo, enophahla lwama-tile aseArabhu, abantu bayo banobungane kakhulu, unokuphefumula. umoya kunye amaqashiso ukuchulumacha ehlambulukileyo
Umbuki zindwendwe ngu- María Jacinta
UMaría Jacinta yi-Superhost
Inombolo yomthetho: A-38/4.1815